मोजोको साथ अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न समस्या भइरहेको छ? | आईफोन समाचार
अप्रिल १ On मा हामीले कुरा गर्यौं Mojo, Cydia जस्तै वैकल्पिक स्टोर जसले तपाईंलाई अनुप्रयोगहरू र भण्डारहरू स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ, तर उपकरण जेलब्रोनको आवश्यकता बिना। त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरूबाट केही गुनासोहरू आएका थिए जसले दावी गरे कि केहि स्थापना हुन सक्दैन, त्यसैले वैकल्पिक स्टोर यी प्रयोगकर्ताहरूका लागि थोरै वा केही प्रयोगको हुँदैन। तर राम्रो कुरा यो छ कि यो रिपोर्ट गरिएको छ कि पुरानो विधि यी सबै अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी यसलाई तल तपाईलाई व्याख्या गर्दछौं।
मोजोबाट अनुप्रयोगहरू कसरी स्थापना गर्ने
तार्किक रूपमा, के गर्न पहिलो कुरा Mojo स्थापना छ। तपाईं यसलाई अनुसरण गरेर गर्न सक्नुहुन्छ यो ट्यूटोरियल.
हामी जाँदै छौं सेटिंग्स / सामान्य / मिति र समय र हामी निष्क्रिय «स्वचालित समायोजन deactiv।
हामी मोजो खोल्छौं।
अब हामी स्रोत ट्याब छनौट गर्दछौं, हामी मोजो रिपोजिटरीमा टच गर्छौं र हामी उपलब्ध भएको सबै देख्नेछौं।
हामी कुनै पनि अनुप्रयोग स्थापना गर्दछौं।
जब हामी स्थापना स्वीकार गर्न पप-अप विन्डो देख्छौं, हामी सुरुवात बटनको साथ बाहिर निस्कन्छौं।
आउनुहोस् चाँडै जानुहोस् सेटिंग्स / सामान्य / मिति र समय, हामीले २०१२ को मिति सेट गरेका छौं र होम स्क्रिनमा फर्कन्छौं। यदि अनुप्रयोगले भन्छ कि यसलाई डाउनलोड गर्न सकिएन, हामी पप-अप विन्डोमा पुनःप्रयास गर्दछौं।
यो पहिलो पटक नहुन सक्छ, त्यसैले हामी यो सफल नभएसम्म पुनर्स्थापना प्रयास गर्दछौं। यो हुन सक्छ कि हामी एक इन्टरमेन्ट पप-अप देख्दछौं जसले भन्छन् कि यो स्थापना गर्न सकिदैन। यदि त्यो केस हो भने, हामी स्वीकार गर्दछौं, उपकरण पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस्। रिबुट पछि, स्थापना सफल हुनेछ।
मोजो हो, जबसम्म हामी यसलाई कामको लागि व्यवस्थित गर्छौं, अन्य प्रणालीहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प, जस्तै iEmulators। दिमागमा राख्नुहोस् कि यस प्रकारको प्रणालीले कर्पोरेट प्रमाणपत्रहरूको साथ काम गर्दछ, त्यसैले तिनीहरू सजिलैसँग हामीले प्रयोग गरिरहेको एउटालाई उल्टाउन सकिन्छ र हामी अनुप्रयोगको आनन्द लिन सक्दैनौं। अधिक विकल्पहरू उपलब्ध छन्, हामीसँग तिनीहरूसँग हामीले प्रयोग गरिरहेको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने कम अवसरहरू छन्।
के यो विधिले तपाईंको लागि काम गर्यो?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » मोजोको साथ अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न समस्या भइरहेको छ? यो प्रयास गर्नुस्
मैले सबै कुरा गरे
र म अझै पनि स्थापना गर्न सक्दिन
mame4ios - आईप्याड मिनी - आईओएस .9.2.1 .२.१
Merlin2031 लाई जवाफ दिनुहोस्
जोसेवी ५१३ भन्यो
मलाई लाग्छ कि लेखले स्पष्ट गर्नु पर्छ कि यो हाल आईओएस .9.3 ..9.3.1 र .9.2.1 ..9.3.१ मा काम गरिरहेको छ, किनकि यो not .२.१ संस्करणमा काम गरिरहेको छैन, मैले यसलाई IOS with ..XNUMX को साथ एकमा प्रयास गरें र यसले काम गर्यो
Josevi513 लाई जवाफ दिनुहोस्
यो जोसेवी 513१XNUMX स्पष्ट पार्नुभएकोमा धन्यवाद।
मोजो अनुप्रयोग अद्यावधिक गरिएको छ र अब यसको इन्टरफेस बिल्कुलै फरक छ, यसले मलाई केहि पनि स्थापना गर्न अनुमति दिँदैन र भण्डारहरू पनि छैनन्, मसँग आईओएस १०.१.१ को संस्करण छ।